दशैं : मान्छे पिच्छेका फरक कुरा ! - Jhilko
दशैं : मान्छे पिच्छेका फरक कुरा !
४ आश्विन,२०७६ 274 0
– योगेश खपाङ्गी
संसारका सबै जातिका आ–आफ्नै किसिमका चाड÷पर्वहरु हुन्छन् । संसारभर छरिएर रहेका नेपालीभाषी र नेपालीजातिको साझा चाड हो दशैं । तर दशैंको फरक किसिमको सांस्कृतिक महत्व हुँदाहुँदै पनि यो चाड सँधै विवादास्पद हुँदै आएको छ । दशैंलाई नेपालमा बडादशैं पनि भनिन्छ भने भारतका हिन्दुहरुले यसैबेला दशहरा पर्व धुमधामसँग मनाउँछन् । भने यसै बेला उपत्यकाका नेवार समुदायले उस्तै प्रकारको चाड मोहनी नखः मनाउँछन् ।
जातै पिच्छे र दशै पिच्छे दशैंका बारेमा थरि–थरिका भनाइ र किंबदन्तीहरु प्रचलनमा रहेको हुँदा दशैंलाई दशैं मात्र भन्ने कि बडादशैं, दशहरा, विजयादशमी, अशोक विजयादशमी वा के भन्ने भन्ने उलझन पैदा भएको छ । त्यसैले यसका बारे घोत्लिनु आवश्यक भएको छ ।
घोडा त आर्यहरुले युरेशियाको फाँटबाट निक्कै पछि भारतवर्षमा भित्र्याएका हुन् । घोडाको उत्पत्ति पनि युरेशिया नै हो । घोडा फुर्तिलो हुन्छ, त्यसैले आर्यहरु बसाँइ सराइ गर्दैै न्यानो र उर्वर भूमी खोज्दै भारतीय उपमहाद्वीपमा छिर्दा घोडाकै सवारी गरेर आए । यताको ढिलो चालको हात्ती, राँगा–भैंसीभन्दा घोडा युद्धमा बहुउपयोगी हुने गर्दथ्यो । त्यसैले आर्यहरुले जमिनी युद्धमा अनार्यहरुलाई हराए ।
महिषासुरको राज्यमा सुख, सुविधा र हर्षोल्लास थियो । त्यसैले युरोपको कृष्ण सागर (ब्लाक सि) को छेउछाउबाट आएका आर्य जातिले महिषासुरको राज्यमा शरण लिए । आर्यहरु र अनार्यहरु एकआपसमा सँधै यु्द्ध गर्थे । पशु, भूमि, स्त्री र शक्तिको लडाई नै थियो देवासुर संग्राम । आर्यहरु आफुलाई जातिगत रुपमा उत्कृष्ण भन्ठान्थे, त्यसैले आफुलाई देवता अर्थात् देव भन्ने गर्दथे ।
विजया दशमी कि अशोक विजया दशमी :
हिन्दुहरुले विजया दशमीलाई रामले रावण माथि विजय गरेको दिन पनि भनि रावणको पुत्ला दहन गर्ने गर्दछन् । खोज अनुसन्धान अनुसार राम र रावण नामको कुनै व्यक्ति इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा फेला पर्दैन । बरु रामलाई नायक बनाइ लेखिएको कृति रामायण फगत एक काल्पनिक कथा हो भनि भारतीय लेखक/अनुसन्धानकर्ताले भनेका छन् । रामायण दोस्रो शताब्दीका शुंग साम्राज्यका संस्थापक तथा प्रथम राज पुश्यमित्र शुंगले आफ्ना दरवारिया पण्डितहरुलाई लेख्न लगाएका थिए । पुश्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्यका सेनापति थिए । १८५ ई.पु.मा अन्तिम मौर्य सम्राट बृहदथको धोकापूर्वक हत्या गरेपछि उनले शुंग साम्राज्यको बिस्तार गरे । जुन दिन उनले चक्रवर्ती सम्राट अशोकका सन्तान बृहदथको हत्या गरे त्यो दिन पनि संयोगवस महिषासुरको हत्या भएकै दिन नवमीको दिन थियो । त्यसदिनको भोलिपल्ट पुष्यमित्रले आमजनतालाई विजया दशमीको रुपमा धुमधामसँग मनाउन उर्दी जारी गरे । तर त्यो दिनलाई मूलवासी जातीय समुदाय तथा बौद्ध धर्म मान्नेहरु अशोक विजया दशमीको रुपमा मनाउँछन् ।
कलिंगको युद्दपछि सम्राट अशोकले विधिवत् रुपमा बौद्ध धम्म अपनाउने निर्णय गरे । एक दिन उनले न्यग्रोध श्रामणेर तथा भिक्खुसंघलाई भोजनको निम्ता गरे । त्यसपछि श्रामणेर आफ्ना आचार्य भंते उपगुप्त तथा बत्तीस भिक्खु सहित राजमहल गए । त्यो अवसरमा त्यहाँ राजपरिवारका सदस्य पनि उपस्थित थिए । भिक्खुहरुको भोजन पश्चात भंते मोग्गलिपुत्त तिस्स ने धम्मदेशना दिए । त्यसै दिन सम्राट अशोकले करुणा, मैत्री, मुदिता तथा शान्तिद्वारा धम्म–विजय प्राप्त गर्ने र अस्त्र–शस्त्र त्यागने प्रतिक्षा गरे । जुन दिन अशोकले विधिवत् रुपमा बौद्ध धम्मको दिक्षा लिए, त्यो दिन अश्विन शुक्ल दशमीको ऐतिहासिक दिन थियो । युद्धबाट वाक्क भएका जनता समेत शान्ति छाउने कुरामा आशावादी बने । त्यस दिनलाई भारतभरका बौद्धहरुले अशोक विजया दशमीको रुपमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाउन सुरु गरे ।
‘अशोककाली दीपदानोत्सव जो दीवाली बन गया’का लेखक आचार्य जुगल किशोर बौद्ध आफ्नो पुस्तकमा दाशी गर्छन् – ‘‘बौद्धको यसै ‘अशोक विजया दशमी’ पर्वलाई हिन्दु धर्मावलम्बीले अपनाएर यसलाई दशहरा नाम दिए । एक प्रकारले बौद्धको यो पर्वको अपहरण गरियो ।’’
तुलनात्मक रुपमा नेपाल भारत र चीनको सांस्कृतिक फ्युजन भएको देश हो । दशैंमा पनि भारत र चीनको फ्युजन देख्न सकिन्छ । यस अर्थमा दशैंलाई नेपालीहरुको मौलिक चाडको रुपमा व्याख्या गर्दा अन्यथा हुँदैन ।
५ श्रावण,२०७६0178
रेडपाण्डाको छाला सहित चार जना पक्राउ
३ फाल्गुन,२०७६053
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–१२ कपन खरिबोटबाट दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डाको छाला १ थान सहित...
सबै नेपालीको दृढ प्रतिबद्धता, इमान्दार प्रयास र मेहनतबाट...
३ आश्विन,२०७६0200
बडादशैंँ, तिहार, नेपाल संवत् तथा छठ पर्वका अवसरमा मंगलबार सन्देश दिँदै उनले विभिन्न...
गुगलले नयाँ स्मार्टफोन ल्याउँदै
३ बैशाख,२०७६0456
गुगलले एआईमा आधारित धेरै फिचर भएको हाइ पिक्सल भएको हाते मोबाइल बजारमा ल्याउन लागेको...
७ चैत्र,२०७६0264
७ चैत्र,२०७६048